मध्यपहाडी लोकमार्गको दुर्दशा: लगातार पहिरो गैरहदा सडक छियाछिया, यात्रा जोखिमपूर्ण (सचित्र) – ebaglung.com
२०७४ श्रावण २८, शनिबार ०३:४०	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
हाइड्रोले नहर भत्काउँदा ५ सय हेक्टर जमिन बाँझै, ठेकेदारको सडक दोहनले लोकमार्ग जोखिममा
सहकर्मी कमल पौडेलको स्थलगत रिपोर्ट
बागलुङ (खर्वाङ) २०७४ साउन २८ । गत २०७३ फागुन २२ गते विहान रिघाको मनेवा पाटामा भीषण सुख्खा पहिरो खसेर दरमखोला थुन्नुका साथै मध्य पहाडी लोकमार्ग क्षतविक्षेत पारेपछी सुरु भएको दुर्दशाको अन्त्य अझै देखिदैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य चलिरहँदा त्यसको माथि पट्टिवाट दरमखोला हाइड्रोले आफ्नो परियोजनाको लागी काम गर्दा सो पहिरो गएको थियो ।
काउछे पहिरोमा जोखिम पूर्ण यात्रा गर्दै पैदल यात्रु ।
लोकमार्ग निर्माणमा हेलचक्राईँ र निर्माणाधीन दरमखोला हाईड्रोका कारण मनेवापाटामा अकस्मात अकल्पनीयरुपमा गएको सुख्खा पहिरोले अहिले क्रोनिक रुप लिएपछी रिघाको मनेवा खण्ड मध्यपहाडी लोकमार्गको लागी अभिशाप बनेको छ । कुनैपनि समय पहिरो गएर लोकमार्ग अवरुद्ध बनी यात्रा कष्टपूर्ण बन्ने गर्छ भने यात्रुहरुलाई ज्यान हत्केलामा राखेर गन्तव्यमा पुग्नु परिरहेको छ । पहिरोले स्थानिय वस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
सडकको कुनामा गिट्टी तथा बालुवा भेटिएपछि निकालिदै अन्य ठाउबाट ल्याएको माटोले पुरिदै ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य जारी छ । निर्माण कम्पनि (ठेकेदार)ले सडक छेउ (कुना)मा भेट्टिएको बालुवा तथा चोक्करलाईे ठुला खाल्डा बनाई अधिकतम मात्रामा झिकिरहेका छन अर्थात सडकको दोहन गरिरहेका छन् भने त्यसबाट बनेको खाल्डोलाई अन्यत्रको माटो लिई भरिँदै छ, जसले गर्दा सडक कमजोर बन्नुका साथै सानो वर्षाबाट पनि लोकमार्ग भासिने, पहिरोजाने र यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । उनिहरु बालबालिकाहरुलाई विद्यालय सम्म लैजान र ल्याउन समेत खतरा भएको बताउछन् ।
काउछेको पहिरोमा डोजर लाइरहेको ।
दरमखोला जलकुने नहर भत्काई दिएपछी खेत बाँझै
गल्कोट नगरपालिका वडा नं. ११ रिघामा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा दरमखोला हाइड्रोले नहर भत्काइ दिएपछि ५ सय हेक्टर खेत बाँझो वनेको छ। झण्डै डेढ किलोमिटर लामो दरमखोला जलकुने सिँचाई आयोजना वाट सिँचित हुँदै आएको रिघाको मनेवा पाटाको सो खेत नहर भत्किए संगै बाँझो वनेको हो । सो सिँचाई आयोजनाको काउछे देखि मनेवा सम्मको धेरै स्थानमा नहर पुरिएको, नहर भत्किएको तथा सेलेभ नै बगाएको उपभोक्ता समेत रहेका स्थानिय डिल वहादुर राकस्कोटी थापाले बताए । राकस्कोटीले सुस्केरा हाले, “नहर वन्द भएपछि चामल खान पनि हराउने भयो ।”
मनेवाको ५ सय हेक्टर खेतमा कतै कोदो रोपिदै त कतै वाँझो ।
‘कहिले बन्ला त नहर ?’ भन्ने प्रश्नमा राकस्कोटीले भने “खै ठेकेदारले वनाउने भनेका हुन् यदि विद्युत परियोजना निर्माण हुँदा काउछेमा ड्याम वनाएर सिँचाईलाई पानी दिने भए त समस्या नहोला, नभए खै के हुने हो ?”
स्थानिय विन्दु शाहीले पनि खेतमा कोदो रोप्न वाध्य भएको वताईन् । शाहीले “नहर बगाएपछि यस्तै भयो, धान रोप्न पाइएन कसैले कोदो रोपेका छौं, कसैको त त्यतिकै बाँझो छ ।”
सो सिँचाई आयोजनाको लागी चालु वर्षको लागी नगरपरिषद्वाट २ लाख वजेट विनियोजन भएको र यसको सन्चालनमा आवश्यक पहल गरिने वडा अध्यक्ष डम्बर श्रीसले बताएका छन् ।
पहिरोले जोखिममा बस्ती ।
पहिरोले जोखिममा बालकुमारी रानाको परिवार
लगातार परिरहेको वर्षा तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको कारण गल्कोट नगरपालिका वडा नं. ११ मनेवा पल्लो सिमलचौरमा एक घर जोखिममा परेको छ । स्थानिय बालकुमारी रानाको घर माथिवाट पहिरो आएको तथा तलवाट मध्यपहाडी लोकमार्गले कटान गर्दा जोखिममा परेको हो । ६ जनाको सो परिवार आर्थिक विपन्नताको कारण जोखिमपूर्ण बसोवास गर्दै आएको छ । सोहि घरकी बुहारी गीता राना भन्छिन “प्रहरी आएर घरमा नवस्न भन्नु भएको हो तर कहाँ जाने ? वस्ने ठाउँ कतै पाइदैन, शहरमा वस्न सकिदैन” । जंगलको विचमा निकै भिरालो स्थानमा रहेको रानाको परिवार भगवान भरोसा जीवन विताउन बाध्य छ ।
मनेवापाटामा गत फागुन २२ गते गएको पहिरो ।
मनेवा पाटामा सुख्खा पहिरो खस्दा थुनिएको दरमखोला विस्तारै घट्दै गएको छ । उतिवेला ठूलो ताल वनेको स्थानमा माथिवाट लगातार खन्ने काम जारी रहेको र सो माटो तथा ढुंगा सोहि तालमा जाँदा ताल पुरिँदै गएको हो भने खोलोले पहिरोले वनेको केहि भाग बाँध भत्काएकोले सो ताल घट्दै गएको छ ।
पहिरोले दरम खोला थुनिएर बनेको ताल ।
पहिरोले दरम खोला थुनिएर बनेको ताल पुरिदै ।